Gufgaf|Online विहे अगावै गर्भवती ? नरगीसको यस्तो भनाई
विहे अगावै गर्भवती ? नरगीसको यस्तो भनाई
अभिनेत्री नरगीस फाखरी यतिबेला आफ्नो आगामी सिनेमा अमावसको काममा व्यस्त छिन् । अहिले उनले सिनेमाको प्रचारको लागि सामाजिक सञ्जालमा लगातार तस्बिरहरु पेस्ट गरिरहेकी छिन् । पछिल्लो समय नरगीस अलि मोटाएकी छिन् । सधै फिट रहने अभिनेत्रीको अचानक तौल बढेको देखेर भारतको एक अनलाईन पोर्टलले नरगीस गर्भवती भएको खबर प्रकाशित गरिदियो ।
उनी गर्भवति भएको खबर भाईरल पनि भयो । इसरी विहे अगावै आफू गर्भवति भएको खबर भाईरल भएपछि नरगीस भने दुखी भएकी छिन् । उनले यस विषयमा ट्विटर मार्फत एकशन लिएकी छिन् । नरगीसले आफ्नो गलत खबर प्रकाशित गर्ने उक्त अनलाईनलाई आफ्नो गलती सुधार्न आग्रह गरेकी छिन् ।
नरगीसले उक्त वेवसाईडको नाम उल्लेख गर्दै लेखेकी छिन्, ‘यो निकै नै गलत कुरा हो । तपाईँ कसरी मेरो बारेमा यस्तो गलत खबर लेख्न सक्नुहुन्छ ? मेरो अलिकती तौल बढ्यो भन्दैमा तपाईँ कसरी मेरो बेईज्जत गर्न सक्नुहुन्छ ?
यो खबर जसले लेखेकोको हो उसलाई मेरो बारेमा केही पनि जानकारी रहेनछ । किनभने यस समाचारमा भएका एक एक शब्द गलत छन् ।’
नरगीसको प्रेम जीवन
बलिवुडमा आएपछि अभिनेत्री नरगीस फाखरीको नाम अभिनेता उदय चोपडासँग जोडिएको थियो । तर उदयसँग सँग ब्रेकअप भएपछि उनको जीवनमा उनी भन्दा ५ वर्ष कान्छा प्रेमी म्याट अलोंजोको आगमन भयो । तर अलोंजोसँग पनि नरगीसको ब्रेकअप भयो । सन् २०१७ देखि लिभ ईन रिलेसनसिपमा रहेका यी दुईले सन् २०१९ को शुरुवातमा विवाह गर्ने कुरा पनि थियो । तर त्यो सम्भव भएन ।
नरगीसले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ईन्स्टाग्रामबाट अलोंजोका सबै तस्बिरहरु हटाएपछि उनीहरुको ब्रेकअप भएको अनुमान लगाईएको हो । यसका साथै नरगीसले अलोंजोलाई ईन्स्टाग्राममा अनफ्लो समेत गरेकी छिन् ।
उता नरगीस उदय चोपडासँग प्रेममा हुँदा पनि उदयकी आमाले उनीहरुको विवाहलाई स्विकृती दिएकी थिईन् । यति मात्रै हैन उदयको घरमा नरगीसलाई भाउजु भनेर बोलाउने गर्थे ।
यहि बीच नरगीसले आफ्नो ईन्स्टाग्राममा अमेरिकन डायरेक्टर म्याट अलोंजोसँग केही तस्बिरहरु सेयर गरिन् । ती तस्बिरहरु अलोंजोको जन्मदिनमा खिचिएको थियो जसमा नरगीसले अलोंजोलाई किस गरेकी थिईन् ।
नरगीस र अलोंजोको निकटाताका कारण उदयले नरगीससँग ब्रेअप गरेको बताईन्छ । तर नरगीसलाई भने उदयले ब्रेकअप दिएपछि निकै ठूलो चोट पुगेको स्रोतले जनाएको छ । उदयसँगको ब्रेकअपको पीडा भुलाउन नरगीस भारत छाडेर केही समय अमेरिका गएको बताईन्छ ।